४ स्वर्ण २ रजत जितेकी गौरिका ढाकाको चोली र साडीमा बालु’वाटार पुग्दा | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
४ स्वर्ण २ रजत जितेकी गौरिका ढाकाको चोली र साडीमा बालु’वाटार पुग्दा
Published On : २६ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:३२
काठमाडौं, २५ मंसिर । ढाकाको चोली, साडी अनि कोट । नेपालकी खेल नायिका गौरिका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यस्तो अवतरामा देखिइन् । सबैजसो खेलाडी ट्रयाक सुटमा देखिंदा गौरिकाको पहिरन फरक थियो ।
गौरिकाको पहिरन हेरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै खुशी भए । गर्वका साथ तस्बिर खिचे । गौरिका ओलीसँग तस्बिर खिचाइरहँदा मुस्कुराइन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि मुस्कुराइरहे । तर, उनको मुहारमा भावुकताको झलक देखिन्थ्यो ।
ओलीले गौरिकालाई स्वाबासी दिए ।
गौरिकालाई पहिरन निकै सुहाएको थियो । उनको पहिरन हेरेर प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य पनि खुशी भइन् । उनको ध्यान गौरिकाको पोशाकमा गयो । केही बेर हेरेको हेरै भइन् ।बाबु पारस सिंह र आमा गरिमा राणासँगै बेलायतमा बसेपनि गौरिका नेपालका लागि खेल्छिन् ।
नेपाली हुनुमा गौरव गर्छिन् । त्यसैले आफूलाई नेपाली होइन भन्दा दुःख लागेको बताइसकेकी छिन् ।१३ औं सागमा नेपालका लागि ऐतिहासिक चार स्वर्ण, दुई रजत र तीन काँस्य जितेकी गौरिका अहिले देश र विदेशमा छाएकी छिन् । उनको सर्वत्र चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा स्वर्ण पदक विजेतालाई जनही ९ लाख: सागमा सर्वाधिक स्वर्ण विजेता गौरिकाले पाउने हुन त?…
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेदकुद प्रतियोगिता (साग)मा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरुलाई सरकारले जनही ९ लाख दिने भएको छ ।
बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्ण विजेता खेलाडीहरुलाई प्रतिब्यक्ति नौ लाख दिने घोषणा गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली रजत जित्ने खेलाडीहरुलाई प्रतिब्यक्ति ६ लाख र कांश्य जित्ने खेलाडीहरुलाई प्रतिब्यक्ति तीन लाख दिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समूहगत स्वर्ण जित्नेलाई पनि जनही पाँच लाख रुपैयाँ दिने जनाउनुभएको छ ।
पदक विजेता खेलाडीसँगै प्रशिक्षकले पनि सरकारबाट पाँच लाख रूपैयाँ पुरस्कार पाउने बताइएको छ । त्यसोत, प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार दशरथ रंगशालामा भएको १३ औँ सागको समापन समारोहलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै विजेता खेलाडीहरुलाई उचित पुरस्कार दिने बताउनुभएको थियो ।
साथै उहाँले सबै विजेता खेलाडीहरुलाई बधाईका लागि बालुवाटार आउन आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । १३ औं सागमा घरेलु मैदानमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कांश्य पदक जितेको थियो ।
सागमा गौरिकाले ४ स्वर्ण २ रजत जितेकी ५६ लाख पाउने !…
काठमाडौँ — प्रधान मन्त्री केपी ओलीले १३ औं सा गमा पदक विजेता खेला डीलाई नगद पुर स्कार दिने घोषणा गरेसँगै सागमा नेपालका लागि सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने गौरिका सिंहले पुरस्कार पनि सबभन्दा धेरै पाउने भएकी छन् ।
बुधबार बालुवा टारमा प्रधान मन्त्रीले गरेको घोष णामा सागमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेलाई जनही ११ लाख पुरस्का र दिने घोषणा गरे । यस हि साबले सागमा ४ स्वर्ण जित्ने गौरिका सिंहले ४४ लाख पाउने छिन् ।
यस्तै, रजत जित्ने लाई ६ लाख घोषणा गरिएअनु सार २ रजत जिते की गौरिकाले थप १२ लाख पाउनेछिन्। यसरी हेर्दा उनले कम्तिमा ५६ लाख पाउने छिन्।
‘गाैरिकाले चार स्वर्ण जितेकाले उनले एक स्वर्ण बराबर ११ लाख पाउनेछिन्,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्ला हकार सूर्य थापाले भने।
व्यक्तिगत तर्फ कांस्य जित्नेलाई ३ लाख दिने घोषणा गरिए पनि टिम इ भेन्टमा जित्ने लाई कति दिने खु लाइएको छैन। यसमा पनि पुरस्कार दिइए गौरिकाले पाउने पुरस्कार रकम अझै बढ्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको घो षणा अनुसार व्यक्तिगत तर्फ स्वर्ण जित्नेले जनही ९ लाख र टिम इभे न्टमा जित्नेले ५ लाख पाउनेछन्।